Zvakanakira maHEGERLS shuttle masherufu:
Yekutanga yekutyaira-mune rack ndeye forklift iyo inopinda yakananga munzvimbo yekuchengetera uye inoisa nhumbi pane rack. Panofanira kunge paine akawanda forklift mashandiro chiteshi. Iyi nzira ine zvakawanda zvakaipira. Zvinotora nguva nekuedza, izvo zvinokanganisa zvakanyanya manejimendi kugona kweiyi imba yekuchengetera. Izvo zvinodiwa zvehunyanzvi zvevashandisi zvakakwirira, uye kune dzimwe njodzi dzekuchengetedza panguva yekushanda chaiko kweforogo inopinda munzira ikozvino yashandurwa kuita shuttle rack, iyo forklift inongoda kushanda kumberi kweimba yekuchengetera, uye shuttle inotakura zvinhu kuenda kunzvimbo yakatarwa. Kuendeswa kweshuttle mota pakati pezviteshi zvakasiyana kunopedzwa ne forklift. Chirongwa ichi chinovandudza zvikuru kugona kwebasa uye chinowana kukurumidza uye kwakachengeteka mhedzisiro.
Izvo zvakanakira zvakanakira
HEGERLS masherufu ekuvhara ndeanotevera:
1. Forklift haidi kupinda munzira, kuchengetedza nguva yekushanda nekuvandudza kuchengetedzeka kwevashandi nezvinhu.
2. Iko kuchengetedza kwekuchengetedza kwezvinhu mudura kunovandudzwa zvikuru.
3. Shandisa zvizere nzvimbo yekuchengetera, mwero wekushandisa mudura unodarika 80%.
4. Kune mhando dzakasiyana dzezvigadzirwa dzinogona kuwanikwa zvinoshandisika negero.
5. Inofananidzwa nemotokari-mumashalofu uye kuburikidza nemashalofu, chimiro chakatsiga uye chekuchengetedza chakakwira.
6. Kutanga-mukutanga-kubuda uye kutanga-mune kutanga-kubuda.
7.Iyo inoshanda kune yakakura yakawanda uye mashoma masampuli enhumbi, senge chikafu, zvinwiwa, makemikari, fodya uye zvimwe zvigadzirwa zvega zvine mabheji makuru uye zvimwe zvinhu zvisina chinhu. Inonyanya kukodzera kutonhorera kuchengetedza nharaunda.
Anenge mafomu maviri ekuchengetedza:
Shuttle garaji inoumbwa neshuttle mota, yekumhanyisa-simbi, pasherufu, mukati-uye-kunze kwekuchengetedza conveyor uye imba yekuchengetera system. Iyo yakakodzera yekuchengetedza bhokisi senge katoni kana bhokisi repurasitiki, uye inotsigira yakavhenganiswa kuchengetedza.
Shuttle masherufu anokwanisa kuwedzera kushandiswa kwenzvimbo yekukurumidza kuwana pallet, kudzikisira kuisa mari (senge kutonhora, kushanda kana kugadzirisa mitengo), uku uchiwedzera kuchinjika. Zvakasiyana neshuttle mota system iyo inonyanya kushandisa bhokisi-mhando kuwana, iyo shuttle-yerudzi pasherufu inoita yekuwana mashandiro muzvikamu zvepallets.
Pashure: Yakakwira-simbi Warehouse Shuttle Kuchengetedza Sisitimu
Zvadaro: HEGERLS radio shuttle mumhanyi